Sit Mone Thu
Daw Su to stand for by election
It was learnt that Daw Su is going to particpate in coming by election. She should take example of Sonya Ghandi who hold only party post though she is popupar among her party. People support her to stand for election.
Posted by Sit Naing at 9:32 PM No comments:
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လစဉ် အကူအညီပေး
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေ လစဉ် အကူအညီပေးမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၃၄ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းက NLD ပါတီ ရုံးချုပ်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လစဉ် အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် မဲနှိုက်ခွဲဝေ တာဝန်ယူတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ အကျဉ်းသား ၄ ရာကျော်ကို အကူအညီပေးမယ့်သူတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့အပြီး ကျန်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေထဲက ၃၄ ဦးကို စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေက တာဝန်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Sit Naing at 1:13 PM No comments:
What DASSK said
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းကြတယ်ဆိုတာမျိုးကို ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် စင်္ကာပူမှာ လာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာ ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင် အချင်းချင်းဝိုင်းပြီး အကူအညီပေးတာ၊ Social Group လူမှုရေးအထောက်အပံ့ပြု၊ လူမှုရေးအကူအညီအဖွဲ့လိုမျိုး စင်္ကာပူမှာ စပြီးလုပ်စေချင်တယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဆက်စပ်ပြီးတော့ Network လို သဘောမျိုးပေါ့။ အဲလို အဖွဲ့လေးတွေကို လုပ်စေချင်ပါတယ်။ www.komoethee.blogspot.com
Posted by Sit Naing at 2:34 PM No comments:
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စစ်ခေါင်းဆောင်များ ဖက်မှ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှိသူ ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာဘို့ လိုအပ်သည်
တချို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များတွင် မိမိခေါင်းဆောင်မှု ရရှိရေး အတွက် လူမျိုးရေး လှုံ့ဆော်မှုကို လုပ်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုရအောင် ယူတတ်ကြသည်။
ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကိုယ့်လူမျိုး သူ့လူမျိုး အမြင်ထက် တနိုင်ငံလုံးရှိသူ သူများသည် မိမိနိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည် ဆိုသည့် အမြင်ရှိဘို့ လိုပါသည်။ ထိုအမြင် ထိုအတွေးရှိမှ တနိုင်ငံလုံး အရေးကို စေတနာထား၍ လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထွန်းအောင်ကျော် (ABSDF) from Htun Aung Kyaw Face book
Posted by Sit Naing at 1:22 PM No comments:
မြန်မာအများစု မကြီးပွါးခြင်း အကြောင်း(မေတ္တာရှင်ဆရာတော်(ရွှေပြည်သာ)
၁။ တကယ် လိုအပ်သော နေရတွင် မလှူဘဲ နာမည်ကြီးမည့် နေရတွင်သာ စုပြုံလှူကြခြင်း။
၆။ အချိန်တန်ဖိုးကို မသိကြတဲ့အတွက်လည်း ကြီးပွါးသင့်သလောက် မကြီးပွါးကြဘူး။
၇။ ကိုယ့်ထက်သာလျှင် မနာလိုဖြစ်ပြီး သူတစ်ပါးအကျိုး ပျက်စီးအောင် ဖျက်ဆီးတတ်ကြတယ်။
၉။ နံပါတ် ၉ အကြောင်းကတော့ ဒေသန္တရဗဟုသုတ မရှိတာပါပဲ။
၁၀။ နံပါတ်တစ်ဆယ် အကြောင်းကတော့ ခေါင်းဆောင်စိတ် နည်းပါးတာပါပဲ။
Posted by Sit Naing at 12:13 PM No comments:
Soft approach to implement.
ယ နေ အချိန် NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်းမာရေး လမ်းစဉ်ကို ပြောဆိုမှု မလုပ် ရေး အလွန်အရေး ကြီး ပါသည်။
All elected opposition representative, especially NDF, participated in Election should boycott Hluttaw, call for press conference.
Very delicate situation now. Instead of criticizing strongly to Junta, need to persuade army staff and soldiers. Easy to advise, difficult to implement.
Posted by Sit Naing at 9:55 AM No comments:
Posted by Sit Naing at 10:00 PM No comments:
News, articles on Burma